Marmar White Xiinka udugga Diffuser - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
Product Description Item no.:ODMF16-092808 Box size: L14.8 * W14.8 * Miisaanka H22.5CM: 0.6awood kg: 12biyo W:60ml Input danab:100-240V, 50Hz / 60Hz danab Output:24V ku jiraan: 1Hooska galaas pc (D13.5 * H13.5cm) iyadoo marmar dhameysatay,1adabtarada pc, 1pc koobka cabbirka, 1pc A4 warqadda fariimaha size. Xidhmada: 3 lakabka sanduuqa jiingado leh insert warqad Most Popular 120ml Xiinka Qaaca Cool diffuser muhiim ah udugga saliid caraf udgoon diffuser la beddelo diiran LED uumi hawada ProdessionalFacto ...
size Box: L14.8 * W14.8 * H22.5CM
1Hooska galaas pc (D13.5 * H13.5cm) iyadoo marmar dhameysatay,1adabtarada pc, 1pc koobka cabbirka, 1pc A4 warqadda fariimaha size.
Most Popular 120ml Xiinka Qaaca Cool diffuser muhiim ah udugga saliid caraf udgoon diffuser la beddelo diiran LED uumi hawada
Waxaad ka heli qeybiyaha xaq u, iibka Your la kordhin doonaa 30%-50% by la design OUTSTNADING shaqeeya
Haddii aad xiisaynayso in waxyaabaha our,pls nala soo xiriir by Cathy @ outstandingdm.com
heer qiimo,aad u fiican tayada iyo aad u fiican adeegga. 24 saac adeeg online +86 18621693186
Dhalaalaya dukumiintiyo / dukumiintiyo matte / varnishing / daahan / daahan UV / dahab aqueous ama lacag Gurdanka kulul (bireed)/embossing / dhameysatay tahay… laga beddeli karaa
Glass, Wood, Platstic, birta,gel silica,baasaboorka,dhoobada,Cement,ama kartoo.
adeeg si tijaabo Small
Haddii aad bilowdo ganacsi, Heer waa dooqa koowaad. Waxaan ku siin karaan photo xal sare waxaad ka dhigi kartaa on your website ugu dhaqso badan. Waxaad heli kartaa waqti badan oo ku saabsan suuq-geynta iyo iibka kooxda. Pls hadda soo xiriir wixii faahfaahin ah
1-7maalmood soo dir,
alaabta mass 25-45days
stock gudahood 1 maalintii
U dir baaritaan noo
Design xarrago leh iyo Furfuris Noiseless: Waxaa loogu talagalay casriga ah hawlgalka deg deg ah.
Waxay u ekaan eegno xarrago leh oo aan marnaba soo saarta iyo kulaylkuna, gariirka ama qaylada, taas oo kaamil ah si ay u isticmaalaan in wakhtiga habeenkii dhigi
Qolka fadhiga,Room yoga, Qolka,Spa Room.
meel kasta oo aad jeceshahay waxaa loo isticmaali karaa, naftaada iyo nolosha ku raaxaystaan…
xirxirida: 3 bidayo sanduuqa jiingado la Styrofoam gudaha iyo waxa ay ka hortagi kartaa dillaacin.
Shipping:Waayo, tiro yar oo si:waxa markab karaa sida ugu dhakhsaha badan;
Waayo, tiro si weyn:25-45 maalmood ka dib oo rumayn Kitaabihii si.
Transport:Door in ay Door;dhibic maraakiibta;gaadiidka Air;gaadiidka Badda.
samaynta Our u gaar ah si xor ah ku siin karaan design on sanduuq baakadaha iyo waxyaabaha labada.
Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah, Pls khadka adeegga warshad call:+86 18621693186
waxyaabaha Our gudbin kartaa testings sida aad u baahan tahay, tus: CE, RoHS, PSE, ETL,FCC, iwm
TOP 1 Caraf udgoon Diffuser Factory: Design fiican &Sameeyo Co., Ltd.
CE, RoHS, PSE, ETL,FCC, iwm. shahaadada kale haddii aad u baahan tahay
America, Europe, Australia, Bariga Dhexe, iyo koonfur bari Asia, dunida oo dhan
Design fiican–10 waxyaabaha cusub ee toddobaadkii.
Adeegga fiican–marka hore Customer,24 saac adeeg online,waad nala soo xiriiri kartaa waqti kasta:
Tayada fiican:100% kormeerka alaabtooda oo dhan
Kooxda fiican:"Time waa dahab" adiga iyo noo. waxaan heysanaa koox xirfadeed si aad u taageeraan.
Waxaan nahay mid ka mid ah kuwaas oo ku siin kara SHAN adeegga macaamiisha STAR. iibka Your la kordhin doonaa by 30%-50% by la design OUTSTNADING shaqeeya
Macquul aheyn waa wax. IMINKA KA SOO DIR WEYDIISASHADA, Waxaan sameyn doonaa OUR BEST IN AAD TAAGEERI.
faa'iido u fiican
Mid ka mid ah stop si ay u iibsadaan oo dhan item udgoonkii, badbaadin waqti iyo lacag badbaadin kuu. Iyada oo taageero xoog leh, ganacsigaaga kordhin doono 50% sanadkiiba.
Q1. Ma waxaad tahay qof soo saaraha ama shirkad ganacsi oo?
Waxaan nahay soo saaraha ah, bixinta OEM & adeegga ODM.
Q2.Are waxyaabaha aad waafaqsan heerarka?
waxyaabaha Our u gudbin kartaa imtixaanka sida aad u baahan tahay, tus: CE, RoHS, PSE, ETL,FCC, MSDS, iwm.
Q3. Waa maxay’ ka MOQ ee wax soo saarka?
1-20-50-200-500-1000-2000-3000-5000-10000-20000 kumbiyuutarada ku xiran size kala duwan ,item, design iyo habka. tiro YAR waa la aqbali karo, pls diri weyddiistay faahfaahin dheeraad ah
Q4. Ma badeecada loogu talagalay by kooxda u gaar ah?
Our alaabta waa mid gaar ah, waxaan heysanaa koox design xirfadeed iyo naqshado cusub oo ka soo baxay toddobaad kasta. Waxa kale oo aanu ka dhigi kara design OEM. Waxaan soo diri kartaa toddobaadka aad design cusub.
Q5. Ma caadi baa in daabaco aan logo?
Pls noo soo dir aad farshaxanimada, waxaan u samayn kartaa. Waxaan taageeri karaa inay ka sameeyaan in tiro yar oo si. Bilow ka 50-100-500-1000pcs
Q6.What waa taariikhda bixinta tusaale ahaan ah?
1-3 maalmood wax soo saarka ee hadda jira;
7-10-15maalmood macaamiisha ee design OEM. Waxaan eegi kartaa case by case.
Q7.How badan udgoonkii aad leedahay
Waxaan la soo shaqeeyay DROM, SYMRISE, Givaudan, Robertet.
Waxaan leenahay 2000 udgoonka kala duwan ee xulashada.
Besting magaca udgoonkii: Rose, lavender, Jasmine, Amber, Vanilla, Sweet Cheries, Ocean, ubaxu orange…
Q8. Maxaa ku saabsan adeegga-iib aheyn ka dib?
24saacadood online, waxaan leenahay waaxda xirfad-iib aheyn ka dib. Wax dhibaato ah, kaliya nala soo xiriir.
Xarrago leh Kan sameeyey qorxiyey uumi Qaaca Muhiimka ah Oil Diffuser uumi
Caraf kartoo Body 100ml Cadar bifbaafka for Women